Category: Uloliwe kuhambo Italy
ekhaya > Uloliwe kuhambo Italy
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu Wena bathwele leenketho xa ugqibe indlela yokuya. Kanye igama movie odumileyo, ungaya nge moya, oololiwe, neminyobo. Xa kuziwa ekubeni bathathe uhambo Italy, kunjalo – there are some definite perks to going by…
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu iiholide abaninzi beach aqala moya uxinzelelo, iibhasi, neziye, kodwa kukho indlela elula. Ukuhamba ngololiwe Iunoncedo ezininzi kangaka, iyishiye nawe uziva ekhululekile phambi kokuba Ndikhe uqale iholide yakho. Enoba ukhangela isidlo esimnandi ngombono yolwandle okanye…
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu YaseVenice ngomnye imizi idolo kwaye imilingo e-Italy kunye sifikelela lula ngololiwe. Ngokutyelela eVenice ngexesha leeholide Easter, unako spring yezulu ezimnandi. Oku kukuvumela ukuba bachithe usuku lonke ngaphandle. Travel to the historic center…